आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन : अवको पर्यटन भविष्य – POKHARA TOURISM NEWS
HomeUncategorizedआन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन : अवको पर्यटन भविष्य
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन : अवको पर्यटन भविष्य
चैत्र ३ पोखरा : कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वव्यापी प्रभाव पार्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसाय यो वर्ष माथि उठ्न सक्दैन । यो स्वभाविक पनि हो ।
हरेक मुलुकको प्राथमिकता आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षामा हुन्छ । यो मानिसले चाहेर भन्दा पनि अकस्मात आइपरेको समस्या हो
नेपालमा एक पर्यटक आउँदा १० जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिन्छ । एक जना पर्यटक आउँदा उसकै कारण एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी, होटल, यातायात, कृषिसहित धेरै क्षेत्र चलायमान भएको हुन्छ । तर, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावका कारण नेपाल पनि अछूतो रहने कुरै भएन ।
अहिले विदेशी पर्यटक आउन छाडेका छन् । बुकिङ रद्द हुने क्रम तीव्र छ । त्यसकारण पर्यटन उद्योग कमजोर हुने पक्का भएको छ ।
पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरु राहत प्याकेज माग गर्न राजधानी पुगेका थिए । पोखरामा पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायीहरुले पोखरा पर्यटन संकट व्यवस्थापन समिति गठन गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी तत्काल राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न केन्द्रिय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा राहत प्याकेज माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा कर्जाको पुर्नतालिकिकरण, संकट व्यवस्थान कर्जा,पुर्नकर्जा,जरिवाना,विलम्ब शुल्क आदि हटाउने बिषयमा प्रस्तुत रहेको कुरा एक पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन समाचारलाई वताए ।
उता पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुले यसरी आफ्ना मात्रै समस्या देखाएर सरकार सँग हात फैलाउन जाने कुरामा विभिन्न क्षेत्र लगायत सामाजिक सञ्जालमा समेत तर्क बिर्तक गरीएको देखिन्छ ।
समस्या पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै परेको होइन यति बेला सम्पूर्ण क्षेत्रको व्यवसाय तहस नहस भएको छ पर्यटन क्षेत्रका होटलमात्र नभई अन्य व्यवसायलाई पनि ठुलै असर परिरहेको देखिन्छ ।
नत समान किन्ने मान्छे छन् ? न व्यापार छ ? एक जना आएर बोहनी गरीदिन्छ कि भनेर कुरेर वस्दा दिन ढल्कीने पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै नभएर स्थानिय क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै गारो भएको स्थानीय पोखरा लोकल वजार क्षेत्रका व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दछन् । उनहरुले अगाडी भन्छन् अगर सरकारले राहात प्याकेज ल्यायो भने सबै क्षेत्रमा लागु हुने गरी ल्याउनु पर्छ हामी पनि आशावादी छौं ।
के पर्यटनलाई बचाउने कुनै सम्भावना छैन ?
अब नेपाल अष्ट्रेलियाको मोडलमा जानु पर्छ र नेपालभित्र आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्धन गनु पर्छ । अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउन छाडेपछि आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ आगोलागीका कारण अष्ट्रेलियामा विदेशी पर्यटक नआएपछि आन्तरिक पर्यटनमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । अष्ट्रेलियाले गरेको प्रयास नेपालका लागि पहीलो पाठ हुन सक्ने देखिन्छ ।
अब एयरलाइन्स, होटललगायत सरोकारवालाको सहभागितामा आन्तरिक पर्यटक लक्षित प्याकेजहरु ल्याउनु पर्छ । मोटरसाइकल चढेर रारा ताल लगायत मुस्ताङ जान तयार हुने नेपाली पर्यटक छन् । होटल लगायत पर्यटन लक्षीत व्यवासाय टाट पल्टियो भने उठ्न निकै कठिन हुनेछ । यसमा ढिलाई नगर्ने कि ? अब पनि हामीले नसोचे कसले सोच्ला पर्यटन क्षेत्रको विकास र बिस्तारमा ? यो पर्यटन व्यवसायीका अगाडी प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पब्लिक पार्टनशीपको नीतिलाई राज्यले व्यवसायिक बनाउन नसक्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन । जसको बाधक हिजो थियो नेपालको राजनीतिक अस्थीरता । जसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको घाँटी अठ्याउने काम मात्र गरेको थियो ।
फेरी बैशाख १२ को भुकम्पले नेपालको नाम झन अन्तराष्टियस्तरमा चिनाइ दियो जसका कारण केही समय माथी उठ्न सकेन तेसै गरी नाकाबन्दी पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्यो, इन्धन छैन, बिद्युत छैन यस्ता विभिन्न बाधा र अवरोध खेपरिहेको पर्यटन क्षेत्रमा फेरी अर्को समस्या देखिएको छ त्यो हो विश्व सामु फैलिएको कोरोना भाइरस यसले गर्दा अहिले पूरै पर्यटन व्यवसयमा अन्यौलता छाएको छ ।
यसलाई राज्यले नीतिगत तवरबाट सम्बोधन गर्दै पर्यटन क्षेत्रको नीजि व्यवसायिक लगानीको ग्यारेन्टी र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिएमात्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नसोचेको सफलता हात मिल्नेमा कसैको दुइमत छैन ।